ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတင်းအချက်အလက် - စက်တင်ဘာလ updated 2019
စက်တင်ဘာလ 28, 2019 – two updates for asylum seekers:
The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 နေ့ရကျ. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”
District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC က, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have hadahearing.
စက်တင်ဘာလ 11, 2019, update ကို:
The US government proposed this new rule on July 16. ထိုကတည်းက, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.
Who does the new rule မဟုတ် လျှောက်ထား?
စက်တင်ဘာလ 9, 2019, update ကို:
သြဂုတ်လ 23, 2019, update ကို:
Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 နေ့ရကျ. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.
သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် the proposed rules in theFederal Register.
သြဂုတ်လ 16, 2019, update ကို:
ယနေ့တွင်, three judges madeadecision inaUS Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.
သြဂုတ်လ 5, 2019, update ကို:
There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, Panama, and Brazil.
The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. အစား, you can choose to return to Guatemala or to your home country.
ဇူလိုင်လ 29, 2019, update ကို:
ဇူလိုင်လ 24, 2019, update ကို:
ဇူလိုင်လ 23, 2019, update ကို:
Expedited removal means deporting people from the USA quickly. ယနေ့ မှစ., it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.
သင်ကဖတ်နိုင် announcement from the Department of Homeland Security.
ဤ “fast-track” process means people do not getacourt hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များ. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer fora“ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ more about expedited removal. သင်တို့သည်လည်းဖတ်နိုင်သည် more about your rights နှင့် more about asylum.
ဇူလိုင်လ 16, 2019, update ကို:
ဇူလိုင်လ 2, 2019, update ကို:
The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to3years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.
ဇွန်လ 2019 update ကို:
People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, တက္ကဆက်ပြည်နယ်. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, နှင့်ပညာရေး.
သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် more details from CLINIC about “Remain in Mexico.” You can also see the DHS information page about the protocols.
ဧပြီလ 17, 2019, update ကို:
ဇန္နဝါရီလ 25, 2019 updates:
Update ကို 1
This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait forahearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 နေ့ရကျ, and then there may be more hearings. The government says they should getadecision within one year. အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Protocols ကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ.
Update ကို 2
မက္ကစီကိုကနေအစီရင်ခံစာများကိုအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိများသူတို့သာကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုမက္ကဆီကန်အရာရှိများပြောသည်ဟုပြော 20 entry ကို၏စန်း Ysidro ဆိပ်ကမ်းတစ်နေ့လျှင်ခိုလှုံခွင့် applications များ. အဆိုပါပလီကေးရှင်းကိုယူပါလိမ့်မည်, ထို့နောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစောင့်ဆိုင်းပြန်မက္ကစီကိုမှသွားပါလိမ့်မယ်.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လူသိများသည် “မီတာတိုင်းတာခြင်းများပါဝင်သည်။” ဒါဟာနယ်စပ်ဒေသမှာစောင့်ဆိုင်းကလူကသာအစုတခုအရေအတွက်ကနေ့တိုင်းလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. မီတာ entry ကို၏အခြားဆိပ်ကမ်းများမှာအသုံးပြုသည်, လွန်း. သင်ကြား မီတာမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာထံမှလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သတ္တုရိုင်း.
ဒီဇင်ဘာလ 21, 2018 update ကို:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် entry ကိုတစ်ဦးဆိပ်ကမ်းကိုတဆင့်မလာကြဘူးသူကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပိတ်ပင်ရန်သမ္မတအမိန့်ကိုငြင်းပယ်.
အဆိုပါတရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမ္မတအမိန့်ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. ဒါဟာသူတို့အရာရှိတဦးကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုမှတဆင့်မလာဘဲလျှင်ပင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလူကနေနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုများကို process ရမယ်ဆိုလိုတယ်.
ဒီဇင်ဘာလ 20, 2018 update ကို:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2018, အတွင်းရေးမှူးအမိမြေလုံခြုံရေး Kirstjen Nielsen ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံဆိုပါတယ် “သူတို့မက္ကစီကိုတွင်ရှိနေစဉ်တစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။” အဆိုပါကြေငြာချက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ပြောပါတယ် “တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရောက်ရှိလာသောသို့မဟုတ်မက္ကဆီကို-တရားမဝင်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲထံမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်။”
သငျသညျခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုပြီးနောက်, ပညတ္တိကျမ်းကိုသင်ပေးထားသောရမည်ဖြစ်သည်ပြောပါတယ် “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး. အဆိုပါအင်တာဗျူးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ကွောကျရှံ့သောအင်တာဗျူးလွန်သွားလိုလျှင်, သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုထို့နောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပါလိမ့်မည်ကပြောပါတယ် “DHS အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ထငျရှားပွဖို့ '' သတိပြုပါပေးထား’ သူတို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးကြားနာမှုအဘို့။” အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သစ်ကိုအုပ်စိုး, သင် USA တွင်စောင့်ဆိုင်းနေအစားမက္ကစီကိုမှစေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်.
အဆိုပါကြေငြာချက်လည်းမက္ကစီကိုစောင့်ဆိုင်းနေလူတွေကိုသူတို့ရဲ့တရားရုံးကြားနာဘို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟု. ဒါပေမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသာသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ကြားနာမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်. ကြွင်းသောအရာပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်. အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်အပြည့်အဝကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ.
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2018 – two updates:
It means that you havearight to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You havearight to be heard before you are deported. But the decision does မဟုတ် mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.
The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come throughaport of entry. But this ruling does မဟုတ် mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.
နိုဝင်ဘာလ 19, 2018 update ကို: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.
The judge says the presidential order goes against the United States’ ပညတ်တရားကို. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come throughaport of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.
The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come throughaport of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does မဟုတ် mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.
နိုဝင်ဘာလ 8, 2018
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနယ်စပ်အပေါ်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထားပါတယ်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ entry ကိုတစ်ဦးအမေရိကန်ဆိပ်ကမ်းကိုသွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်.
The rule will start at midnight on Friday, နိုဝင်ဘာလ 9. It lasts for 90 နေ့ရကျ. The new rule does not apply to children without an adult.
Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.
You need to ask foralawyer. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, you have the right toalawyer, but you MUST ask foralawyer. You need to say, “I want to speak toalawyer now.” Keep asking every person you talk to foralawyer until you are given access toalawyer.
If you have passed your asylum interview (calleda“ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး) you will getahearing in front ofajudge to make your case for asylum. It can takeavery long time to getahearing. You should be released from detention while you wait.
သို့သော်, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2,afederal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview withoutagood reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak toalawyer.
အချို့ကိစ္စများတွင်, children of asylum seekers have been separated from their parents.
If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it isafree service. Hours are Monday to Friday 8:00 နံနက်. သို့ 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.
ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်, in Spanish or English.
သငျသညျ (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:
Asylum in the USA: အသစ်က USCIS ဖြစ်စဉ်ကို
ပြောင်းရွှေ့လာသောလူထိန်းသိမ်းရေး: help for individuals applying for asylum
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ Clinical, အဆိုပါ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန, အဆိုပါ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.